Thu, Jun 4, 2020 at 7:26pm
साेनीले ल्यायाे टिसर्टमै फिट हुने मिनि एयर कन्डिसनर! टिसर्टसहितकाे मूल्य १९ हजार
काठमाडाैं, १० साउन । सोनीेले टिसर्टमै फिट हुने मिनि एयर कन्डिसनर एसी ल्याएकाे छ । जापानको बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी सोनीेले टिसर्टमै फिट हुने मिनि एयर कन्डिसनर एसी निर्माण गरेको हाे। यसको नाम ‘रियोन पकेट’ राखिएको छ। यस एसी मोबाइल फोनभन्दा हलुका हुने जनाइएको छ। यस एसी ब्याट्रीको सहयोगमा चल्नेछ। यसलाई ब्लुतुथमार्फत् स्मार्टफोनसँग जोड्न सकिने जनाइएको छ। सोनीका अनुसार दुईघन्टा चार्जगर्दा यो ९० संचालनमा अनउनेछ। यस एसी..
४ दिनदेखि नेपाल टेलिकमका सबै सेवा बन्द, टावरको कभरेज कम हुँदा सधैं मारमा
जाजरकोट, १० साउन । जाजरकोट सदरमुकामलगायत जिल्लाको विभिन्न स्थानमा चार दिनदेखि टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ । पटकपटक अवरुद्ध हुने टेलिफोनले गर्दा यहाँका स्थानीय हैरान छन् । नेपाल टेलिकमको चरम लापरवाहीका कारण यहाँका स्थानीय हैरान भएका छन् । मर्मतका लागि पटक पटक कुरा गरे पनि काम नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताउनुभयो । टावरको कभरेज कम हुँदा सधैं मारमा टावर आए पनि नेपाल..
काठमाडौँ, १० साउन । माग बमोजिम दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसअघि १३ प्रतिशतले बढाएको इन्टरनेटको मूल्य फिर्ता लिएका छन् । यससँगै विगत एक वर्ष अघिदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने र फिर्ता लिने प्रवृत्ति पनि अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ६ गतेको बैठकले दूरसञ्चार (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि बढेको १३ प्रतिशत मूल्य..
फेसबुकले तिर्याे अहिलेसम्मकै ठूलाे जरिवाना, गोपनीयता व्यवस्थापन कमजोर भएकाे आरोप
काठमाडाैं, ८ साउन । अमेरिकाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अहिलेसम्मकै उच्च जरिवाना तिरेकाे छ । फेसबुकले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम ५ अर्ब डलर जरिवाना तिरेकाे हाे । अमेरिकाको संघीय व्यापार आयोग 'एफटीसी'का अनुसार फेसबुकको गोपनीयता व्यवस्थापन कमजोर भएकाले ५ अर्ब डलर जरिवाना गरिएको हो । यस्तै, फेसबुकले गोपनीयता हेर्ने एउटा स्वतन्त्र समिति पनि बनाउनु पर्नेछ र यसमा फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख मार्क जुकर्बर्गको नियन्त्रण हुनु हुने..
विदेशबाट आउने अपरिचित कल नउठाउन दुरसञ्चार प्राधिकरणकाे अनुराेध
काठमाडौं, ९ साउन । दुरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशबाट आएकाे अपरिचित कल नउठाउन सबैमा अनुराेध गरेकाे छ । विदेशका अपरिचित नम्बरहरुबाट आउने मिस्डकल तथा फोनले प्रयोगकर्ता हैरान बनेपछि दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नियामककारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता कलहरू नउठाउन र कलब्याक नगर्न सबैमा आग्रह गरेको हाे । पछिल्लो समय टेलिफोन र मोबाइल नम्बरमा विदेशका अपरिचित नम्बरबाट बारम्बार फोन तथा मिस्डकल आउने समस्या देखिएको छ ।..
विराटनगरका १४ स्थानमा निःशुल्क वाइफाई !
विराटनगर, ८ साउन विराटनगर महानगरपालिकाले आजदेखि नगर क्षेत्रका १४ स्थानमा निःशुल्क वाईफाई सेवा सञ्चालन गरेको छ । वल्र्ड लिङ्क प्रालि र महानगरपालिकाबीचको सम्झौतामा सो सेवा सञ्चालन गरिएको हो । पहिलो चरणमा कञ्चनबारी, पुष्पलाल चोक, खारजी, ठूलोमिल चोक, प्रादेशिक अस्पताल(कोशी), मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण(भृकुटी चोक), विराटनगर विमानस्थल, बसपार्क, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, बरगाछी, हनुमान मन्दिर(मेनरोड) र ट्राफिक चोकमा वाइफाई सेवा..
चन्द्रमामा एलियनकाे संसार रहेको नासाकाे दावी
एजेन्सी । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी 'नासा'ले चन्द्रमाबारे संसारलाई चकित पार्ने कुरा खुलासा गरेको छ। नासाले चन्द्रमामा प्राचिनकालमा एलियन्स रहने बताएकाे हाे । यही जुलाई २० का दिन चन्द्रमामा मानवले पाइला टेकेको ५० वर्ष पूरा भएको छ । यसै खुशियालीमा विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइयो । यसबीचमा नासाले चन्द्रमामा एलियन्सको संसार रहेको केही प्रमाण पनि प्राप्त भएकाे बताएकाे छ । नासाले केही दिनअघि चन्द्रमासँग सम्बन्धित केही तस्विरहरु..
वर्ल्डलिंकको नँया योजना : अब हरेक टिभीमा युट्युब
काठमाडौँ ८ साउन वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले आफ्नो नँया योजना अन्तर्गत अब हरेक टिभीमा युट्यब नामक प्रोडक्ट अफर स्वरुप ल्याएको छ । सेवा अन्तर्गत वर्ल्डलिंकका नेटटिभी प्रयोगकर्ताले अब टिभी मार्फत नै साथीभाइ वा सपरिवारसँग युट्युबको भरपूर फाइदा प्राप्त गर्न सकिने छ । यो सुविधा स्मार्ट टिभीमा मात्र नभई नन स्मार्ट वा सि आर टि टिभीमा पनि उपलब्ध छ । हाल नेटटिभीले आफ्ना ग्राहकका लागि ८०..
काठमाडौँ, ७ साउन विज्ञापनका नाममा सामाजिक सद्भाव भड्काउने, विकृति सिर्जना गर्ने तथा अनर्गल प्रचारबाजी भइरहेको भन्दै सांसद तथा विज्ञले त्यस्ता विज्ञापन सामग्री प्रकाशित प्रसारित नहुनेगरी विज्ञापन ऐन बनाइनुपर्ने सुझाउनुभएको छ । ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०७५’ बारे संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकको छलफलमा उहाँहरुले खाद्यान्न, मदिराजन्य पदार्थलगायतको विज्ञापनमा महिलाको प्रयोग रोग्ने तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएका संवेदनशील विषयबारे भ्रामक रुपमा गरिने प्रचारलाई..
अन्तत: नबढ्ने भयाे इन्टरनेटकाे १३ प्रतिशत मूल्य !
काठमाडाैं, ७ साउन । सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन विभिन्न छुट तथा सहुलियको व्यवस्था गरेको छ ।सरकारले दुरसञ्चार नियमावली संशोधनमार्फत् साे व्यवस्था गरेकाे हाे । यससँगै दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु साउन एक गतेदेखि बढाएको मूल्य फिर्ता लिने पक्षमा देखिएका छन् । राउटर, इन्ट्रानेट लिज डाटा कनेक्टिभीटी, मर्मत शुल्कमा नियमावली संसोधनमार्फत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागिएपछि व्यवसायीहरुले मूल्य बृद्धिबाट ब्याक हुने संकेत गरेका..
नेपालमा इन्टरनेट प्रयाेगकर्ताकाे संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि, १ वर्षमै ४४ लाख थपिए
काठमाडौं, ६ साउन । नेपालमा १ वर्षकाे अवधिमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । यस अवधिमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या ४३ लाख ६० हजार भन्दा बढी थपिएका हुन । २०७५ वैशाखसम्म इन्टरनेटका प्रयोगकर्ता १ करोड ४३ लाख थिए भने २०७६ वैशाखसम्म बढेर १ करोड ८६ लाख पुगेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म देशका ६३ प्रतिशत जनता इन्टरनटको पहुँचमा छन् । तर कतिपय एकै व्यक्तिले दोहोरो रुपमा गरिरहेको इन्टरनेट प्रयोग..
चन्द्रमामा पहिलो मानव पाइलाको ५० औँ वर्षगाँठ, के छ ईतिहास ?
काठमाडौँ, ५ साउन । २० जुलाई १९५९ मा त्यो इतिहास बनेको हो, जब नील आर्मस्ट्रंगसहितको टोली पहिलोपटक चन्द्रमाको धरातलमा पाइला टेकेका थिए । अमेरिकाको एयरोनटिकल इन्जिनियर तथा सेनाका पाइलट नील आर्मस्ट्रंगले पहिलो पटक चन्द्रमाको धरातलमा पाइला टेकेर इतिहास रचेको मानिन्छ । चन्द्रमामा मानिसले पहिलोपटक पाइला टेकेको ५० औँ वर्षगाँठ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाईँदैछ । सन् १९६९ को जुलाई २०–२१ मा एपोलो..
युट्युबको नयाँ फिचर : अब भिडियो नहेरी गीतमात्र सुन्न पाइने
काठमाडौँ, ५ साउन युट्युबले आफ्ना प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ फिचर ल्याएको छ । उक्त नयाँ फिचरका कारण अब युट्युवको गीत स्टि्रमिङ्ग हुने प्लाटर्फम युट्युब म्युजिकमा कम डाटा खर्च गरी गीत सुन्न तथा हेर्न सकिनेछ । तथापि यो फिचर केवल पि्रमियम प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । यो नयाँ फिचर अनुसार अब युट्युब म्युजिकको पि्रयिम सेवाका प्रयोगकर्ताले युट्युबमा कुनैपनि गीतको भिडियो हेर्ने कि गीतमात्रै सुन्ने..
काठमाडौँ, ५ साउन । काठमाडौं उपत्यकामा सिसी क्यामेराको प्रभावकारीता बढदै गएको छ । प्रविधिको बढदो प्रयोगसँगै सिसी क्यामेराको फुटेजको आधारमा उपत्यकाभित्र प्रहरीले एक बर्षको अवधिमा १८ हजार घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरेको छ । उपत्यकाभित्र हुने आपराधिक क्रियाकलाप हुन नदिन र सम्भावित घटनालाई नियन्त्रण गर्नका लागि जनशक्तिसँगै सिसी क्यामेराको प्रयोगमा जोड दिएको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक शैलेस थापा..
काठमाडौँ, ३ साउन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी)को कार्यसमूह–२ का वैज्ञानिकको पाँचदिने बैठक आज काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । आईपीसीसी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका लागि वैज्ञानिक निकायका रुपमा काम गर्ने संस्था हो । आईपीसीसी सचिवालयको आयोजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सह–आयोजनामा उक्त बैठक भएको हो । बैठकमा आगामी सन् २०२२ मा प्रकाशन गर्ने विश्व जलवायु परिवर्तन प्रतिवेदनका एजेण्डामा छलफल भएको थियो..
फोनमा ‘हेल्लो’ भन्ने चलन यसरी चल्यो ...
काठमाडौँ, ३ साउन फोन उठाउने बित्तिकै पहिलो शव्द हुन्छ : हेल्लो । त्यसपछि मात्र फोन गर्ने मानिससँग बाँकी कुराकानी हुन्छ । आखिर फोनमा किन र कसरी हेल्लो भन्ने चलन आयो होला ? यो सबैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यस विषयमा अनेक प्रकारका दाबीहरु छन् । तर त्यसमध्ये एउटा भरपर्दो तथ्य चाहिँ यस्तो छ । टेलिफोनका आविष्कारक हुन् अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल । १०..
काठमाडौँ, ३ साउन नक्कली बिलविजक जारी गरी राजश्व चुहावट तथा चोरी तस्करी रोक्न ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा इन्ट्री (प्रविष्ट) गराउने कार्य तिब्र रुपमा अघि बढेको छ । व्यवसायीहरुले धमाधम सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराउँदै मालसामान ओसारपसार गरिरहेका छन् । यही साउन १ गतेदेखि सरकारले ढुवानीका सामान सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । आजमात्रै..
आयोजनास्थलको अनुगमन गर्न यन्त्र जडान गरिँदै
काठमाडौँ, ३ साउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ११ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न आयोजनास्थलमा ‘आयोजना अनुगमन प्रणाली’ जडान गर्न कार्य अन्तिमचरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिले तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रुम)बाट नै ती आयोजनाको अनुगमन गर्न सिसीटिभी जडान गर्न थालिएको हो । अहिलेसम्म पाँच वटा आयोजनास्थलमा ‘आइपी क्यामेरा’ जडान गरिसकिएको कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार..
के मानव मस्तिष्क ह्याक गर्न सम्भव होला ?
काठमाडौँ, ३ साउन एलन मस्कले न्युरालिंक नामको कम्पनी खडा गरेका छन् । उनले मानव मस्तिष्कमा चिप्स लगाएर मानव शरीर कम्प्युटरसँग जोड्ने योजना बनाइरहेका छन् । अर्थात् उनी मानव मस्तिष्क ह्याक गर्न चाहन्छन् । जसरी हामी विभिन्न वेबसाइट ह्याक गर्दछौं त्यस्तै मानव मस्तिष्क ह्याक गरेर मानवलाई प्रविधिको नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने उनको अवधारणा छ। एलन अन्तरीक्षयान निर्माता कम्पनी स्पेसएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।..
फेरियो ट्विटरको ‘ले आउट’
वाशिङटन, ३ साउन ट्विटरले आफ्नो ले आउट फेरेको छ । गएको सोमबारदेखि यसले आफ्नो वेबसाइटको रिडिजाइनलाई फेर्न थालेको थियो । जस अन्तर्गत केही महत्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । यसमा लगिङ आउटमा नगइ स्वीच भेट्टाउन सकिने र विभिन्न प्रक्रिया पूरा नगरी प्रत्यक्ष मेसेज पठाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एउटा कुरा भने परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि ट्विट सम्पादन गर्न भने सकिँदैन..
कति विश्वासिलाे छ 'फेसएप' ?
काठमाडाैं, २ साउन । पछिल्लाे केहि समययता फेसएपकाे प्रयाेग निकै बढीरहेकाे छ । एपकाे प्रयाेगबाट अनुहारको तस्बिर सम्पादन गरेर साबिकको भन्दा युवा वा वृद्ध अवस्थाकाे तस्विर राख्ने प्रचलनकाे निकै चर्चा भइरहेकाे छ । उक्त एप प्रयोग गरेर प्राप्त परिणाम हजारौँ मानिसले सामाजिक सञ्जालमार्फत्‌ सार्वजनिक गरिरहेका छन्। पछिल्ला केही दिनदेखि चर्चामा रहेको उक्त एपबारे कतिपयले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू एप निर्माण गरेको कम्पनीले..
आईएमएस केयरको न्यूरोड स्थित सेवाकेन्द्र पुनः सञ्चालनमा
कठमाडौं, २ साउन । आईएमएस केयरलेले काठमाडौंको न्युरोडमा आफनो सेवा केन्द्र पुनः सुचारु गरेको छ । आईएमएस केयरले काठमाडौंको न्युरोडस्थि ताम्राकार कम्प्लेक्समा सेवा केन्द्र पुनः सुचारु गरेको हो । यस सर्भिस सेन्टरको स्यामसम इलेक्ट्रोनिक्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा उप–सभापति आईएमएस गु्रपका अध्यक्ष दिपक मलहोत्रा, स्यामसम इलेक्ट्रोनिक्स्का नेपालका प्रबन्धक प्रणयरत्न स्थापित र आईएमएस गु्रपका सिइओ र प्रेसिडेण्टश्री दिकेश मलहोत्राले उद्द्दाटन गरे । नेपाल अधिराज्य भरी..
इन्स्टाकाे नयाँ फिचर ! अब लाइक्स नदेखिने
काठमाडौँ, २ साउन । चर्चित एप्लिकेशन इन्स्टाग्रामले आफ्नो नयाँ फिचरको परीक्षण सुरुवात गरेको छ । फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको इन्स्टाले प्रयोगकर्तामा दबाब कम गर्नका लागि फोटो अथवा भिडियोमा देखिने लाइक्स नदेखिने बनाउन लागेको हो । थोरै लाइक्स भएका फोटो अथवा भिडियो प्रयोगकर्ताले डिलेट गर्थ थालेपछि यस दबाबलाई कम गर्नका लागि इन्स्टाले यस फिचर परीक्षण थालेको हो । यो परीक्षण हाल अस्ट्रेलिया, जापानसहित केही मूलुकमा परीक्षण गरिएको..
पाइपलाइनबाट आउन लाग्यो तेल, ओली–मोदीबाट उद्घाटन गराउने योजना
काठमाडौँ, २ साउन । पाइपलाइनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सुरु भएको छ । नेपाल–भारत क्रस बोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन तयार भएपछि डिलेज ल्याउन थालिएको हो । बुधबार दिउँसो २ बजे भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) को मोतिहारी डिपोबाट छाडिएको डिजेल १८ घन्टापछि बिहीबार साँझ ६ बजे नेपाल आयल निगमको बारास्थित अमलेखगन्ज डिपोमा आइपुग्नेछ । आइओसीको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको पाइपलाइनको सबै परीक्षण सकिएपछि..
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ‘फेस एप’ के हो ? कत्तिको सुरक्षित छ ?
काठमाडौँ, १ साउन सामाजिक सञ्जालमा अहिले बुढ्यौलीमा तपाई कस्तो देखिनु हुनेछ भन्ने तस्बिर देखाउने ‘फेस एप’ भाइरल भएको छ । विभिन्न मुलुकका धेरै प्रयोगकर्ताले यसको उपयोग गरिसकेका पनि छन् । यो एप प्रयोग गरिसकेकाहरुको डेटा असुरक्षित भइसकेको विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । अब प्रयोग नगर्न उनीहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् । फेसबुकले पनि समयसमयमा जथाभावी एप्सहरु नचलाउँन भन्दै आइरहेको छ । ‘फेस एप ओल्ड..
१३ प्रतिशत बढाइएकाे इन्टरनेट शुल्क फिर्ता गर्न नेता महरको चेतावनी
काठमाडौं, १ साउन । नेपाल विद्यार्थी संघका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नैनसिंह महरले इन्टरनेटको शुल्क बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले श्रावण १ देखि लागु हुने गरी इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत शुल्क बढाउने निर्णयको नेता महरले घोर भत्त्सना गरेका छन् । सरकारको निर्णय लगत्तै नेता महरले उक्त सरकारी निर्णय निकै खेदजनक भएको बताए । चौतर्फी असफलताको..
Results 781: You are at page9of 27